စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၀ ) ( အသိပညာ နဲပြီး နုံနဲ့တဲ့ —ုန်းကြီး ( အချို့ ) တွေ ဖတ်ဖို့စာ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၀ ) ( အသိပညာ နဲပြီး နုံနဲ့တဲ့ —ုန်းကြီး ( အချို့ ) တွေ ဖတ်ဖို့စာ )
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၀ ) ( အသိပညာ နဲပြီး နုံနဲ့တဲ့ —ုန်းကြီး ( အချို့ ) တွေ ဖတ်ဖို့စာ )
Posted by Foreign Resident on Feb 19, 2014 in Think Different | 20 comments
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၀ )
( အသိပညာ နဲပြီး နုံနဲ့တဲ့ —ုန်းကြီး ( အချို့ ) တွေ ဖတ်ဖို့စာ )
ဟဲ ဟဲ ၊ သူကြီး ရဲ့ ” သင်္ကန်းခြုံ သောနုတ္တိုရ်လက်သစ်များ ” ဆိုတဲ့ Post လေးဖတ်ရင်း ၊
အဘ လဲ ၊ တစ်ချီ တစ်မေါင်း ဝင်ပြောချင်လာလို့ ။
ဟဲ ဟဲ ၊ ခေါင်းစဉ်လေးက အသိပညာ နဲပြီး နုံနဲ့တဲ့ —ုန်းကြီး ( အချို့ ) တွေ ဖတ်ဖို့စာ ဆိုတော့ ၊
အသိပညာ မနဲဘဲ ၊ မ နုံနဲ့တဲ့ ၊ —ုန်းကြီး တွေ နှင့် တော့မဆိုင်ဘူးလို့ သဘောထားပေးပါ ခမျ ။
ကြုံလို့ တစ်ခု အရင် ပြောလိုက်ဦးမယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့ ( ၁၆ – ၀၂ – ၂၀၁၄ ) က ၊ ဆစ်ဒနီမှာ လုပ်တဲ့ ၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ရှိုးပွဲ ကို သွားအားပေးဖြစ်တယ် ။
ထွန်းအိန္ဒြာဘို ၊ ချစ်သုဝေ နှင့် လင်းလင်း တို့ သီဆို ဖျော်ဖြေကြတယ်ပေါ့ ။
သူတို့က အမေစု ရဲ့ ပညာရေး ရန်ပုံငွေ အတွက် လုပ်အားခ အလှူ လာရောက် ဖျော်ဖြေတာပါ ။
အဲဒီပွဲမှာ တွေ့ရတာက ၊ ထွန်းအိန္ဒြာဘို က သူတို့ကို စင်ပေါ်တက်လာပြီး ဆုချတဲ့ ငွေတွေကို ၊
အဲဒီ စင်ပေါ်မှာတင် ဖွင့်ဖေါက်ပြီး ငွေ Amount ကို ကြေငြာပါတယ် ။
သူက ပြောရှာပါတယ် ၊ ဒီလို တစ်ခါတည်း ဖွင့်ဖေါက် ကြေငြာရတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါတဲ့ ။
ဒီပွဲက ရမယ့်ငွေတွေ အကုန်လှူမှာ မို့ ၊ အောက်က စာရင်းကောက်မယ့်လူတွေ လဲ ၊
သိသာအောင် နှင့် အများသူငှာ ပွင့်လင်းမြင်သာ အောင်လို့ပါတဲ့ ။
အောက်က ပရိသတ်ကြီး ထဲကလည်း ၊ လှူချင်တဲ့သူတွေ တက်လှူကြသပေါ့ ။
အများစုကြီးကတော့ ၊ တစ်ခါ တက်လှူ ၅၀ / ၁၀၀ လောက်ဘဲ လှူနိုင်ကြရှာတာပါ ။
အဲဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ရင်ထဲက ခံစား စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် ။
၁ – ၁ ။
ထွန်းအိန္ဒြာဘို ၊ ချစ်သုဝေ နှင့် လင်းလင်း တို့ ခမျာ ၊
သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ကျိုး မပါ ၊ တစ်ပြားမှ မရ / မယူ ဘဲ ၊
နိုင်ငံ အတွက် ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ပညာရေး အတွက် ၊
တကယ့်ကို ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံနေတဲ့ ၊
တိုင်းပြည်ရဲ့ တကယ့် ရတနာ သူရဲကောင်းတွေဘဲ လို့ ။
၁ – ၂ ။
သြော် နိုင်ငံ့ အကျိုး ကို တကယ် လုပ်နေရှာတဲ့သူတွေ ခမျာ ၊
အခွင့်အရေးတွေ မတရား မပေးနိုင်တာမို့ ခရိုနီကြီးတွေဆီက မရနိုင်တော့ ၊
သူတို့မှာ ရှိတဲ့ အနုပညာ အရည်အချင်းနှင့် ပြည်သူကို ဖျော်ဖြေ လှူံ့ဆော်ပြီး ၊
ဒေါ်လှလေး ၅၀ မျိုး ၊ ၁၀၀ မျိုး ကောက်သင်းကောက် စုနေရရှာတယ် ။
စိတ် မ ကောင်းဘူး ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ရှိုးပွဲ
ဒီ Post မှာ အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ၊ သိပ် မကြာသေးခင်ကဘဲ Face Book ပေါ်မှာ ၊
ဦးနိုင်ဝင်း ဆိုသူ ရေးတဲ့ Post ကောင်းလေး တစ်ပုဒ် ဖတ်မိတယ် ။
အရင်ဆုံး အဲဒီ Post ကောင်းလေးကို ရွာသူားတွေ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး ။
၈၈ များ ထောင်ချောက် ဧရိယာထဲသို ခြေတစ်လှမ်း စဝင်ခြင်း
သိုမဟုတ် ….. ဥသဘ ဗျူဟာ အဖွင့် စတင်ခြင်းပေလော …… ။
၈၈ ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီးက ၊
အမျိုးသားရေဆိုတဲ့နေရာမှာ အစွန်းမရောက်ဖို့ ပြောကြားခြင်းနှင့် ၊
ကိုမြအေးဟာ နိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံအကျိုးအတွက် ၈၈ အဖွဲ့တွင် ၊
အရင်ကတည်းက ပူးတွဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အစွန်းရောက်စကားကို ၊
ဘယ်တုန်းကမှ ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဒဲ့ဒိုး ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ ။
အထက်ပါ ကိုကိုကြီး၏ ပြောကြားချက်မျိုး ၊ ၈၈ အဖွဲ့က တုန့်ပြန်ချက်မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ၊
စစ်အာဏာရှင်များက အမျိုးသားရေးဆိုပြီး မဟာဗျူဟာမြောက် ထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီး ။
၈၈ အဖွဲ့ကိုသာမဟုတ် အန်အယ်လ်ဒီပါတီကိုလဲ ဤကဲ့သို့ ထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ ။
နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာက နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတွက် နိုင်ငံသားအားလုံအတွက် ၊
နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွား တိုးတက်ရေး ကောင်းမွန်ရေး ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသာ ၊
အဓိကထားပြီး ရှု့မြင်သုံးသတ် လုပ်ဆောင်ကြတယ် ။
စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာက ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရော ၊
အာဏာရ လူတစု အတွက်သာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို ၊
အဓိကထား ကာကွယ်လုပ်ဆောင်ကြတယ် ။
ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံရေးသမားများ၏ နိုင်ငံကောင်းကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာ ၊
ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံ ပါဝင်နေလေတော့ ၊
၇၅% ကျော်ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဘာသာခြား ကိုယ်ကွယ်မှု မတူကြသူများ ၊
တိုင်းရင်းသာလူနည်းစုများနှင့် လူမျိုးခြားများပါဝင်ပါတယ် ။
ဒီတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေက မွတ်စလင်ဘာသာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အကဲဆပ်ချင်တဲ့ ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို အသုံးချဖို့ ကျိုးစားလာကြတယ် ၊
အဲဒါကြောင့် ၂ နှစ်လုံးလုံး မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးကို ၊
နည်းမျိုးစုံ ဗျူဟာခင်းပြီး ရန်တိုက်ပေးနေသလို ၊
အကဲဆပ်ချင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ၊
နောက်ကွယ်ကမြှောက်ပေးပြီး ကြိုးကိုင်လာတယ် ။
ဒီနေရာမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေကို ၊ မမှန်ရင် မမှန်သလို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောမည့် ၊
ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို တရားဟောခွင့်တွေ ပိတ်လိုက်တယ် ၊
ဒါပေမယ့် စစ်အာဏာရှင်တွေ အလိုကျ ဟောပြောမည့် ဘုန်ကြီးတွေကို ၊
အဲ့ဒီတော့ အမှားတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကြားနေရရင် အမှန်တွေလို့ ထင်လာသလို ၊
ဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာမှ မွတ်စလင်တွေကို မနှိမ်နင်းရင် ၊
မြန်မာပြည်ကြီး ပျက်စီးသွားတော့မည့်အတိုင်း ဝါဒတွေ ဖြန့်လာတယ် ။
လူပြိန်း အချို့ သိုမဟုတ် အဆင်မပြေတာတွေများပြီး ၊
အလိုလိုနေရင်း ပေါက်ကွဲချင်နေတဲ့ လူအချို့နှင့် ၊
ချုပ်တည်းမှု့တွေ တသက်လုံးများနေခဲ့ပြီး ၊
လွတ်လပ်ခြင်းကို နားမလည်တဲ့ ဟေးလားဝါးလားသမားတွေဟာ ၊
တနိုင်ငံလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားနှင့် တရားမျှတရေးကို ဆောင်ရွက်နေသူတွေက ၊
စစ်အစိုးရဲ့ မတရားလှည့်ကွက်တွေအောက်မှာ မတရားမှု့တွေ သိပ်များလာရင် ၊
လက်ပိုက်ကြည့်နေကြမှာမဟုတ်ဘူး ကြားဝင်လှုပ်ရှားလာကြလိမ့်မယ်ဆိုတာ ၊
အာဏာရှင်တွေ ကောင်းကောင်းနားလည်နေလေတော့ ။
အလွန်မတရားတဲ့ ထောင်ချောက်တွေဖြစ်တဲ့ လယ်ယာမြေ ပြဿနာများ ၊
ဦးပိုင်စစ်တပ် ပြဿနာများနှင့် ဘာသာရေးပြဿနာဖြစ်အောင် ၊
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ ရန်တိုက်ပေးပြီး ဖန်တီးလာကြတယ်၊
ဥပမာ မွတ်စလင် ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ အာဇာနည်ကြီးတဦးဖြစ်သူ ဦးရာဇတ်ကိုတောင်မှ ၊
မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေလို့ အာဇာနည်မဟုတ်ဘူး လက်မခံနိုင်ဘူးစသည်ဖြင့် ၊
၆၅ နှစ်ကာလတိုင်အောင် မြန်မာ / ကမ္ဘာမှာ မြန်မာအာဇာနည် သမိုင်းဝင်သူကို ၊
ပယ်ဖျက်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဘာသာရေး မုန်းတီးမှု့ဖြစ်အောင် မှိုင်းတွေ တိုက်လာခဲ့တယ် ။
အဲ့ဒီလို မတရားသဖြင့် ဥပဒေမဲ့ပြောချင်ရာပြော လုပ်ချင်ရာလုပ်လာတာကို ၊
အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ၈၈ တွေက ထောက်ချောက်ဆိုတာကြီးကို မြင်ပါတယ် ၊
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက် ပြဿနာဆိုတာကြီးကို မဖြစ်စေချင်လို့ ၊
တတ်နိုင်သလောက် လက်ရှောင်နေထားခဲ့တယ် ။
ဒါကလဲ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် စစ်အာဏာရှင်တွေကို တော်လှန်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေနဲ့ ၊
လူယုတ်မာတွေကြားမှာ ဆုတ်ယုတ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်ချိန်ထိုးရင် ၊
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရလာဘ်တွေကို မဆုတ်ယုတ်စေချင်လို့ပါ ။
ဒါပေမယ့် ပြဿနာက မဖြစ်ဖြစ်အောင် ၊
ပြည်သူတွေက မပေါက်ကွဲ ပေါက်ကွဲလာအောင်၊
မကျေနပ်မှု့တွေ မပွင့်အံ ပွင့်အံလာအောင် ၊
မဟာဗျူဟာ အခင်အကျင်းတွေနဲ့ အကွက်တွေချပြီး ဖန်တီးလာတယ် ။
ခုတော့ လွန်သည်ထက် လွန်လာပြီး ၊ မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်စစ်တွေကို ၊
ဘာသာမတူတာနဲ့ ရန်သူလို သတ်ဖို့ လုပ်လာကြတာကို မြင်နေရတယ် ။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၊ ဒီမိုကရေစီရရင် မွတ်စလင်နိုင်ငံဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ၊
မမှန်ကန်တဲ့ ဘာသာရေးမှိုင်းတခုကို လူတွေက အဟုတ်ထင်လာစေပြီး …..
ကိုမြအေးကို ကုလားဆိုပြီး ရန်တိုက်ပေးလိုက်တော့ ၊
မမှန်တာကို မတရားတာကို ဒီထက် လက်ရှောင်နေရင် ခွေးသာသာ ဖြစ်ရတော့မယ် ။
အသေခံတိုက်ပွဲဝင် ဒီမိုသမားတွေကို ဘာသာရေး မုန်တိုင်းတွေအကြားမှာ ၊
၈၈ ဒီမိုလှေကို တိုပီတိုနဲ့ပစ်ပြီး တိုက်ပွဲခေါ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။
ကိုမြအေးတယောက်ထဲအတွက်နဲ့ ထောက်ချောက်ထဲ ဝင်မှာလားလို့ မေးစရာရှိပြန်တယ် ။
ဒါက ၈၈ ကို မီးနဲ့စပြီး တို့ပေးလိုက်ခြင်းပါ ။
ဒီခြေလှမ်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ကုဋေတစ်သန်းမကတဲ့ ၊
ကျုံးသွင်းထားတဲ့ စစ်မောင်းထောင်ချောက်တွေက အဆင့်ဆင့်၊
ခြေတလှမ်းအဝင် မှားလိုက်တာနဲ့ ဂိမ်းအိုဗာအဆင့် ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတာ ၊
နိုင်ငံရေးသမားတွေ သိကြတယ် ။
အဲ့ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးမှာ ဟန်ဆောင်ထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ အမာခံတွေတောင် ၊
ခြေလှမ်းတွေ ပေါ်တင်ပြောင်းကုန်ကြတာ သကောင်းသားတွေ သိပါတယ် ။
ထောင်ထားတဲ့အကွက်က ဖွတ်ဖြစ်မလား ကျွတ်ဖြစ်မလားဆိုတာကြီးပေါ့ ၊
ဒီအချိန်မှာ သွေးကြောင်လို့ ကျွတ်ဖြစ်မှာ ကြောက်တဲ့လူတွေ ဖွတ်ဖြစ်သွားကြတာကတော့ ၊
အခုတော့ ကိုကိုကြီးက ဒီတိုက်ပွဲကို ၊
လက်မရှောင်သာတော့ပဲ လက်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင် မမှားပါဘူး ။
အဓိက မှတ်သားစရာကတော့ ၊
၂ – ၁ ။
ရွှေညဝါ ဆရာတော် ၊ ဒါယ်အိုး ဆရာတော် စတဲ့ ၊
မမှန်ရင် မမှန်သလို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောမည့် ၊
ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို တရားဟောခွင့်တွေ ပိတ်လိုက်တယ် ။
ဒါပေမယ့် စစ်အာဏာရှင်တွေ အလိုကျ ဟောပြောမည့် ဘုန်ကြီးတွေကို
ထင်သလိုပြောဖို့ ခွင့်ပြုထားတယ် ။
၂ – ၂ ။
အဲ့ဒီလို မတရားသဖြင့် ဥပဒေမဲ့ပြောချင်ရာပြော လုပ်ချင်ရာ လုပ်လာတာကို ၊
အန်အယ်လ်ဒီ နဲ့ ၈၈ တွေက ထောက်ချောက် ဆိုတာကြီးကို မြင်ပြီးသားပါ ။
တတ်နိုင်သလောက် လက်ရှောင်နေခဲ့တယ် ။
၂ – ၃ ။
ကိုမြအေး တယောက်ထဲ အတွက် နဲ့ ထောက်ချောက်ထဲ ဝင်မှာလားလို့ မေးစရာ ရှိပြန်တယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ မမှန်တာကို မတရားတာကို ၊ ဒီထက် လက်ရှောင်နေရင် ၊
ခွေးသာသာ ဖြစ်ရတော့မယ့် အခြေအနေကြောင့် ၊
တရားမျှတမှု ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ဒီမိုသမားတွေ ကိုယ်စား ၊
ကိုကိုကြီး ( ၈၈ ) က စတင်ပြီး ပြန် တုံပြန် ရတော့တာပါ ။
အဲဒီ Post လေးမှာလေ ၊ အချက်အလက်လေးတွေကို ကြိုက်လွန်းလို့ ၊
ရေတွင်းပျက်ထဲက ဖားသူငယ်လို အမြင်ကျဉ်း ပညာနုံနဲ့လွန်းတဲ့ ၊
ဘုန်းကြီး ( အချို့ ) တွေ ကို ဖတ်စေချင်လွန်းလို့ ၊ အဘ က ၊
” အသိပညာနဲပြီး နုံနဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ဖတ်ဖို့စာ ” ဆိုပြီး ၊
Comment လေး ရေးလိုက်မိပါတယ် ။
အဲဒီမှာ တင်ယောက်က အဘ ကို ၊
” သံဃာကို စော်ကားဖို့ မင်းမိဘက သင်ပေးထားသလား ” တဲ့ ။ ဟီ ဟိ ။
အမှန်ကတော့ အစထဲက အဲဒီ အတွေးအခေါ်ဟာ မှားနေပါတယ် ။
အသက် ၂၁ နှစ်ပြည့်ပြီးသား ၊ ကောင်းစွာ တွေးခေါ်နိုင်တဲ့ ၊
Adult လူကြီး တစ်ယောက် ရဲ့ တွေးခေါ်တာ ၊ ပြုမူတာဟာ ၊
သူ့ မိဘ နှင့် ဘာမှကို မဆိုင်တော့ပါဘူး ။
ပြောရရင် ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်နေပါပြီ ။
အဲဒါနှင့်ဘဲ အဘ လည်း ၊ သူ့ကို အောက်ပါအတိုင်း အကြောင်းပြန်လိုက်တယ် ။
” သံဃာကိုစော်ကားဖို့ မင်းမိဘက သင်ပေးထားသလား “
ငါ့ မိဘ က သင်ပေးစရာ မလိုဘူး ။
ငါ့ အသက်အရွယ် နှင့် ၊ ငါ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝ အတွေ့အကြုံ နှင့် ၊
ငါ့ တစ်သက်တာ လေ့လာ ဆည်းပူးခဲ့တဲ့ ပညာ တွေ အရ ၊
ဒီလို ဘုန်းကြီးမျိုးတွေ နှင့် ထိုက်တန်တယ်ထင်တဲ့ စကားလုံး ၊
” အသိပညာနဲပြီး နုံနဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ဖတ်ဖို့စာ ” လို့ သုံးတာ ။
ဘာဖြစ်သတုံး ၊ ငါ ပြောတဲ့အထဲမှာ ဆဲတာ တစ်ခွန်း ပါလို့လား ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြောင်း ခြေခြေမြစ်မြစ် မသိဘဲနှင့် လာပြောမနေနှင့် ။
ငါ ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး ဝိပဿနာ တရားစခန်း ၃ ခါတောင်ဖွင့်ဖူးတယ် ။
သံဃာ အစစ်အမှန်ကို မ ကြည်ညိုတတ်ဘူးလဲ လာမပြောနှင့် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ November ကဘဲ သိန်း ၃၀ နှင့် ၊
သံဃာ့ဆောင် အခန်းတစ်ခန်း လှူထားတာ ၊
မင်းမယုံရင် ငါ့ Profile ပေါ်တက်ကြည့်လို့ရတယ် ။
အေး ၊ မင်းတို့ကသာ အဲဒီလို ဘုန်းကြီးမျိုးတွေ ကို အထင်ကြီးနေတာ ။
ငါတို့လို နိုင်ငံတကာ အဆင့် ၊ အမြင်ကျယ်တဲ့ ၊ ပညာတတ်တွေက ၊
ဗုဒ္ဓ ရဲ့ မေတ္တာတရား အစစ်ကို ယုံကြည်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစစ်တွေ က ၊
အဲလို မတရား မမျှတမှုတွေကို လုပ်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကြောင့် ၊
ငါတို့ လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုယ်စား အရှက်ရနေတယ် ။
အဲလို အစွန်းရောက် ဘုန်းကြီးတွေကို ၊ ငါတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ အရှက်ကို လှည့်ခွဲနေတဲ့ ၊
ငါတို့ ဗုဒ္ဓသာသနာကို မျက်နှာပျက်အောင် လုပ်နေသူတွေလို့ ယူဆတယ် ။
ဒါကြောင့် ၊ ငါက ၊
ငါတို့ရဲ့ မေတ္တာတရား နှင့် စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနှင့် ၊
အဲဒီလို အစွန်းရောက်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချတယ် ။
ဒါဟာ ငါ့အမြင်အရတော့ ၊ ငါ့နည်းနှင့် ငါ ဗုဒ္ဓ သာသနာပြုနေတာဘဲ ။
ငါ့နည်းနှင့် ငါ ဗုဒ္ဓ သာသနာကို သန့်စင်အောင် လှုံ့ဆော်နေတာဘဲ ။
မြန်မာပြည် ဥခွံထဲက အတွေးအခေါ်လောက်နှင့် တက်လာမပြောနှင့် ။
အဲဒီမှာ ၊ ဘေးလူတွေဆီက ၊ အဘ ဘက်က ထောက်ခံတဲ့ Comment တွေ ၊
တက်လာပြီးနောက်မှာတော့ ၊ အဲဒီ အဘ ကို လာပြောတဲ့သူလည်း ၊
သူ့ Comment ကို သူ ပြန်ဖျက်ပြီး ၊ လစ်သွားပါလေရော ။
OK ၊ အခုမှ ဘဲ အဘ ရဲ့ သဘောထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတော့မယ်နော် ။
၃ – ၁ ။
အခု ၉၆၉ တွေ ၊ မဘသ တွေ ၊ လုပ်မှ / လှုံ့ဆော်မှ ဘဲ ၊
မြန်မာပြည်မှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဒင်းကြမ်းဖြစ်လာပြီး ၊
အဘ တို့ ရဲ့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ သမိုင်း တစ်လျှောက်မှာ ၊
ဂုဏ် ကျက်သရေ ၊ အကျဆင်းဆုံး အခြေအနေ နှင့် ကြုံတွေ့နေရတယ် ။
၃ – ၂ ။
ဒီလိုသာ ဆက်ပြီး ၊ မတရားမှုတွေကို ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေက ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ၊
သိပ် မကြာခင်မှာဘဲ ၊ လူစိတ် ရှိတဲ့ ၊ လူသားချင်း ကိုယ်ချင်း စာနာစိတ်ရှိတဲ့ ၊
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ၊ ပညာတတ်တဲ့ ၊ အမြင်ကျယ်တဲ့ ၊
ပညာတတ် သူတော်ကောင်း တွေဟာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်ခွာကြတော့မှာပါ ။
၃ – ၃ ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ အဘ အနေနှင့်ကတော့ ၊
အဘ တို့ရဲ့ မေတ္တာတရား နှင့် စစ်မှန်တဲ့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနှင့် ၊
အစွန်းရောက် ၉၆၉ တွေ ၊ မဘသ တွေ က ၊ သာသနာကို ကာကွယ်တယ်လို့ ထင်နေပြီး ၊
အဘ တို့လို့ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ၊ သာသနာကို အရှက်လှည့်ခွဲနေတယ်လို့ မြင်နေတဲ့ ၊
” အစွန်းရောက် အမြင်ကျဉ်း ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ မ တရား လုပ်ရပ်တွေ ကို “
အဘ ကတော့ ကြုံတဲ့အကြိမ်တိုင်းမှာ ထောက်ပြ ကန့်ကွက်သွားမှာပါ ။
ဒါဟာလည်း ၊ အဘ အမြင် ပြောရမယ်ဆိုရင် ၊ အဘ နည်း နှင့် ၊ အဘ ဟန် နှင့် ၊
ဗုဒ္ဓ သာသနာကို သန့်စင်အောင် ၊ လှုံ့ဆော် သာသနာပြုနေတာဘဲလေ ။
အခုပြောမှာကတော့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Personal သိပ်ဆန်တဲ့ စကားတွေပေါ့လေ ။
၄ – ၁ ။
အဘ ဟာ မေတ္တာ တရား ကို အဓိကထားတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်ပါ ။
အဘ ကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး ၊ ဝိပဿနာ တရားစခန်း ၃ ခါတောင်ဖွင့်ဖူးခဲ့ပါတယ် ။
ဘာသာရေး နှင့် ပါတ်သက်ပြီး အမြဲမပြတ် လဲ ဆည်းကပ် လှူဒါန်း နေသူပါ ။
၄ – ၂ ။
အဘ တစ်သက်တာမှာ ၊
အဲဒီ ဘာသာခြားတွေဟာ ကောင်းရှာပါတယ် ဆိုတဲ့ စကား တစ်ခွန်းတောင် မ ပြောဖူးဘူး ။
အဘ မှာလည်း မျက်စိတွေ နားတွေ ပါတဲ့အတွက် ၊ ဥာဏ်ပညာလဲ အတုံးကြီး မဟုတ်တဲ့အတွက် ၊
သူတို့တွေ ရဲ့ မတရားမှု တွေ ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလဲ မြင်ပါတယ် ။
ခပ် ရှင်းရှင်း ပြောရရင် ၊ အဲဒီ ဘာသာခြားတွေကို အဘ လဲ မကြိုက်ပါဘူး ။
၄ – ၃ ။
ဒါပေမယ့် ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတော့မယ်နော် ၊
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ကို ချစ်လှပါပြီ ဆိုတဲ့ ၊
ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ သာသနာ ကို ကာကွယ်ချင်လှပါပြီ ဆိုတဲ့ ၊
ရဟန်း ရှင်လူ ၊ ညီ အစ်ကိုတော်များ ခင်ဗျား ။
တကယ့် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း တွေသာ ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊
အခု ခင်ဗျားတို့ကို အပြစ်ပြောနေတဲ့ အဘတို့လို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေကိုတောင်မှ ၊
ခင်ဗျားတို့ကဘဲ ၊ ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ကာကွယ်ပေးမယ့်သူတွေဆိုတာ ၊ ယုံပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ခင်ဗျားတို့ ချစ်တဲ့ ၊ ကာကွယ်ချင်တဲ့ ၊ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ သာသနာတော် ကို ၊
ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဆန်ဆန် လုပ်ရပ်တွေနှင့်ဘဲ ကာကွယ်ကြပါဗျာ ။
( ခင်ဗျားတို့ ဘာသာ ၊ လူဘဲ သတ်သတ် ၊ အကြမ်းဘဲ ဖက်ဖက် )
( ပြီးရင်တော့ ကိုယ် လုပ်ရဲပြီးရင် ၊ ကိုယ် ခံရဲ ကြပေါ့ဗျာ )
( ငါ့ ရဲ့ ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်အတွက် ငါ ထောင်ကျခံ / အသေခံပြီး တိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ )
ဒါပေမယ့် ၊ မေတ္တာတရားတွေ နှင့် ထုံမွန်းနေတဲ့ ၊ နိုင်ငံတကာမှာ ၊
အေးချမ်းပြီး ရန်သူမရှိလို့ နာမည်ကောင်းရနေတဲ့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ၊
၁ ။ မ တရားတဲ့ ဥပဒေ ( မျိုးစောင့် ဥပဒေ ) တွေ ပြဌာန်းပြီး ၊
၂ ။ မ တရားတဲ့ လုပ်ရပ် ( ကိုမြအေး ကို တရားဟောခွင့် မပြုခြင်း ) တွေ လုပ်ဆောင်ပြီး ၊
ကျနော်တို့ရဲ့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓ သာသနာတော်ကြီးရဲ့ အရှက် ကို မခွဲကြဖို့ ၊
တောင်းပန် တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ် ။ ( ချစ်ရာ မရောက်ဘဲ ၊ နှစ်ရာ ရောက်နေလို့ပါ )
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဥပမာ ပြရရင်တော့ ။
အမေရိက မှာလဲ အမေရိကန် သမ္မတ က ၊ တရားမျှတမှု အကြောင်း ဘယ်လိုဘဲ ပြောပြော ၊
အောက်က စီအိုင်အေ လို အဖွဲ့မျိုးက ၊ လုပ်သင့်တယ်ထင်တဲ့ အလုပ်တွေကို ၊
ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လုပ်သွားတာပါဘဲ / လုပ်သွားမှာပါဘဲ ။
ဒါပေမယ့် ၊ တရား မ မျှတ တဲ့ အလုပ်မျိုး ( မျိုးစောင့် ဥပဒေ ) တွေကို ၊
ဥပဒေ ထဲ ထည့်မပြဋ္ဌာန်းဖူးဗျ ။ ဥပဒေ ထဲ ထည့် ပြဋ္ဌာန်းဖို့လည်း မ တောင်းဆိုဘူး ဗျ ။
တရား မ မျှတတဲ့ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး ( ကိုမြအေး ကို တရားဟောခွင့် မပြုခြင်း ) တွေ ကို ၊
အမေရိကန် သမ္မတကြီး / အစိုးရ က လုပ်ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ ။ လုပ်ရင် ဖမ်းမဗျ ။
အဲဒီတော့ ၊ သမ္မတကြီး / အစိုးရ က နာမည် မပျက် အရှက်မကွဲဘူးပေါ့ဗျာ ။
သမ္မတကြီး / အစိုးရ က အပြစ်လွတ်သပေါ့ဗျာ ။
( တပည့် လိမ္မာတော့ ၊ ဆရာ အာပါတ် လွတ်တယ် ခေါ်ရမပေါ့ )
အခုတော့ ကြားလို့မှ ကောင်းကြသေးရဲ့လား ။
သံဃာ မဟာနာယက အဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်ကြီးတွေ နှင့် တိပိဋက ဆရာတော်တွေ ၊
အင်္ဂလန် UK နိုင်ငံမှာ တရားပွဲသွားလုပ်ဖို့ Visa လျှောက်တာ ၊
Visa အငြင်းခံရတယ် Reject တဲ့ဗျာ ။ ကြားလို့မှ ကောင်းကြသေးရဲ့လား ။
ထောင်ချောက်ထဲ မျက်ကန်းပြီး တိုးဝင်နေမှတော့ ထောင်ချောက်ဆင်ထားတဲ့သူကနည်းသေးတယ် ထင်ဦးမှာပဲ။
မျက်ကန်းတွေ ဘာသာချစ်တာက တစ်မျိုးဗျနော်။
ရတနာ ၃ ပါးက ပထမ ၂ ပါးကိုကျော်ပြီး……
အဲ !! အဲ့နောက်က တတိယ ရတနာ ထဲကမှ လူသတ်ဖို့ဟောတဲ့ သေနတ်ကိုင်တဲ့ ရတာနာ နောက်လိုက်ပြီး…..
ငြိမ်းချမ်းရေး အေးချမ်းရေး ဖြန်ဖျေရေး တရားဟောတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေကျ ဆဲသတဲ့။ သင်္ကန်း ဆွဲချွတ်သတဲ့။
မကြုံစဖူးတော်။ ဘုန်းကြီး လူသတ်ဖို့ဟောတဲ့တရား သေနတ်ကိုင်တာတွေ ပြောမိလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မစစ်ဖူးအပြောခံရသေးးး
အမုန်းတရား စိတ်ထဲထားနေတာနဲ့တင် ဘာ တရားမှ မရှိဘူးဆိုတာ သိနေနိုင်တာပဲ။။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အတွက် ငရဲ ကြီးမယ် ဆိုလည်း ကြီးတဲ့။
-လက်ရှိ ဖြစ်ရပ်တွေ ဒီ နှစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပ်တွေကြည့်ရင်တော့
.ဆရာတော်ကြီးများ သံဃာတော်စစ်စစ်များ စောင့်ရှောက်ကယ်မ ကြပါပေါ့…..
.ဒါပေမယ့် ဒါ့ထက်ပို ပြီး ထဲထဲဝင်ဝင်တွေးကြည့်ရင်
.ဒါတွေက ဘုန်းကြီးအဖြစ်ကို သင်္ကန်းကို အသုံးချပြီး မတော်မတရား လုပ်တာတွေက
.နောင်လဲ ဖြစ်နေမှာပဲ… ပိုတောင်ဆိုးလာဦးမယ်..။
.ဘုန်းကြီးတွေ လူလိုနေ လူ့အသုံးအဆောင်တွေသုံး လူ့အလုပ်တွေလုပ်နေပြီး အဲဒါကို လက်ခံနေသရွေ့
.တနည်းအားဖြင့် လူနဲ့တူတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ပြည်သူကကိုးကွယ်နေသရွေ့
.သာသနာရော နိုင်ငံရော နလံထူစရာမရှိ..။
.ဘုရားက ဘုန်းကြီးတွေ ဘယ်လိုနေ ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို
.အကွက်စေ့စေ့ သေသေချာချာပြောထား ဟောထားခဲ့ပြီးသား။
.ဘုရားထက်တစ်လကြီးချင်တဲ့ လူတွေ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အပြောအဟော ဆင်ခြေဆင်လက်တွေကြောင့်
.မရှိခိုး၊ မကိုးကွယ်၊ မလှူတန်း၊ အဖက်မလုပ်ကြတဲ့ တစ်နေ့ ရောက်ခဲ့ရင်…
(ကျုပ်ထင်တာတော့ အဲဒီနေ့ကို ဘယ်တော့မှ ရောက်တော့မယ်မထင်ဘူး……)
အာရှမှာကျ.. ဗုဒ္ဓဘာသာက. မြောက်ဖက်ထွက်ပြေးသွားပြီး.. မဟာယာနအနေနဲ့ကျန်တာပဲ..။
၂၀ရာစုအကုန် ၂၁ရာစုအ၀င်မှာ.. အဲဒီခရုးဆိတ်ကအသွင်တမျိုးနဲ့စလာပြန်တယ်..။
ယူအက်စ်နဲ့အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေနဲ့….ထိတ်တိုက်တွေ့တာမှာ.. စစ်ပန်းလာတာမို့… ယူအက်စ်ကကျန်တဲ့ဘာသာကြီးတခုလက်ထဲထိုးထည့်ပေးနေတာမှာ.. အဓိက.(စိနပြည်က) သိသိသာသာလက်ရှောင်ယုံမက.. အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေကို.. နောက်ကနေစီးပွားရေလုပ်နေခဲ့တာ…။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုံးကလည်း.. ဘာမှမဆိုင်တဲ့မြန်မာပြည်.. ဂျပန်-မဟာမိတ် ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့နေရာရောက်ပြီး.. မိအေး၂ခါနာဖြစ်ခဲ့ရဖူးပြီ…။
မောထှာ .. အဘရယ်.. နယ်က ဘုန်းကြီးတွေ ဆဲတာလည်း ခံခဲ့ရပြီးပြီ.. နင်တုိ့မိန်းကလေးတွေ ကောင်းဖို့ လုပ်နေတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေကို နင်က ဘာကိစ္စ မထောက်ခံရတာတုန်း တဲ့.. ဘုန်းကြီးနဲ့ ရန်ဖြစ်လို့လည်း မကောင်းလို့ ဘာမှမပြောဘဲ ပြန်လာခဲ့တယ်..
အဲဒီ အာဏာရှင်ဆိုတာတွေကို အမေ့စကား ခဏငှားပြီး ပြောလိုက်ချင်တယ်..
ဘာအာဏာတွေ စည်းစိမ်တွေမက်မက် တစ်နေ့ကို ထမင်းသုံးနပ်ထက် ပိုစားလုိ့ မရသလို.. သေရင်လည်း ဘာမှယူသွားလို့ မရဘူး.. စံစားတော့ တစ်မိသားစုလုံး… ခံရတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း.. သူ့အကြောင်းတရားနဲ့ သူ သွားမှာပဲတဲ့…
ဖွဘုတ်မှာ အများဆုံးတွေ့ရသူတွေကတော့ “နိုင်ငံတော်က ငါ့အတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ? ” ဆိုတာကို မျှော်လင့်သူတွေများသဗျို့ မြန်မာပြည် လူဦးရေ ထက်တောင် ပိုများနိုင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အကောင့်ကို အများကြီးပွားပြီးသုံးတယ် Pages တွေ Groups တွေကို ထိုင်ရာက မထစတမ်းလုပ်နေကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ မြန်မာပြည်လည်း နောင် 10နှစ်မှာ Hacker တွေများလာနိုင်ဖွယ်ရှိပါကြောင်း :mrgeen: ပြောရမယ်ဆိုရင် ငယ်ငယ်က ကြည့်ဖူးတဲ့ တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲထဲကလို ရန်ငြိုးနဲ့ ကလဲ့စားချေစိတ်တွေ ကြီးမားတာရယ်။ မြန်မာကားတွေ မကြိုက်ပါဘူးလို့ တွင်တွင်ပြောပြီး တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ မြန်ကားထဲက Dialogues ဘောင်ထဲက မလွတ်နိုင်သေးတာတွေ ဒုနဲ့ဒေး အဟေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
စကားအတင်းစပ်.. ဟိုလူက..ဆံပင်ကြီးနဲ့ဗျ…။ ဘုန်းကြီးတော့ဟုတ်ပုံမပေါ်…။
ဆေးပင်စင်ယူထားတဲ့ စစ်မူထမ်းဟောင်းတစ်ဦးလို့ ရဲမှတ်တမ်းမှသိရပါသည်တဲ့…
ရဲကိုဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်တာ နာရီဝက်လောက်ကြာမှရောက်လာတယ်တဲ့…ဩော်…ကူညီပါ့စေရဲ့ စိတ်ဓါတ်…
၁၇-၂-၂၀၁၄သာသနာတော် သန့်ရှင်းစေရန်ဝါးခယ်မမြို့ သံဃာစည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ သမဏသာရုပ္ပ မဖြစ်သော ရဟန်း
သာမဏေများကို အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ဓာတ်ပုံများကို ဖော်ပြအပ်ပါသည် ။ထို ပုဂ္ဂိုလ် အာ့း  17-2-2014 ရက်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက တရားလိုပြုလုပ်ပြီးသာသနာ ညှိုးနွမ်းမှုဖြင့် တရားစွဲဆို အပြစ်ပေးရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တဆိုင်ဝင်တဆိုင်ထွက်အလှူခံတယ် အရက်သောက်တယ် လို.လည်းသိရပါတယ် ။ဤကဲ့သို့သော မကြည်ညိုဖွယ်
ကိစ္စများ တွေ့ရှိပါကအမျိုး ဘာသာ သာသနာစောင့်ရောက်လိုသူများသည်ဆရာတော်များနှင့် ပူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံတိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ဆက်သွယ်ရန်
ဖုန်း နံပါတ်များမှာ0949703467 ၊ 0949348719 ၊0949228907 ၊0949703473 ၊ 09422464239သို့ ဆက်သွယ်၍..သာသနာပြု ကုသိုလ်ရယူကြပါရန်
ဘုန်းကြီး/သင်္ကန်းဝတ်လို့ သုံးနှုန်းရင် သာသနာဝန်ထမ်းရဟန်း အစစ်အမှန် များနဲ့ ရောထွေးနေတော့ ပြောရခက် နားလည်ရခက် အရေးယူရခက် ဖြစ်နေပါတယ်။
သင်္ကန်းအရေခြုံ လို့ သုံးချင်ပါတယ်။
ငါးခုံးမပုပ်တွေကြောင့် ငါးကြင်းငါးတန် လတ်လတ်ဆပ်ဆပ်တွေ အပုပ်နံ့နံတယ် လို့ ထင်ခံရပါတယ်။
…….ကြိုက်လွန်းလို့ fb ကိုရှယ်ယူသွားပါတယ် ကိုဖေါ့ရေ………
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့ စ်ပါ…။
ကျနော့် အမြင်မှာတော့ ဒီလိုပို့ စ်ကို ရေးလို့ ဘဖော တစ်ယောက် သောတာပန် အနာဂမ် မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်
ဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးရဲ့ တာဝန်ကျေပါတယ် ဘဖောရေ..။
တော်တော်များများတော့မဟုတ်ဘူး။ တစ်စုတစ်ဖွဲ့လေးလို့ယူဆရတဲ့သူတွေ လိုင်းပေါ် မှာရေးတာ မမြင်ချင်လည်း မြင်နေရတော့ စိတ်ထဲကသိကအောက်ဖြစ်စရာပါပဲ။ ကျော်ဖတ်ပေမဲ့ မမြင်ချင်လည်း မြင်လာရတော့ …. သူတို့က ဒီလိုဆိုလာတယ်။
ဒီမိုတွေက သံဃာတော်တွေကို စော်ကားနေတယ်…..
တစ်ဆက်ထဲထပ်သုံးနှုန်းတဲ့ အသုံးနှုန်းက NLD ကဆိုပြီးပါ ထပ်တွဲချတယ်။ ဘယ်သူမဆိုပါပဲ… သံဃာဆိုတာထိတော့ဘယ်ခံနိုင်ကြမလဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း မကျေနပ်စရာစကားပေါ့။ ကိုယ်လည်း
ပါတီဝင်မဟုတ်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ သံဃာစစ်သံဃာမှန်တွေကို ထိခိုက်လာရင်တော့မခံချင်ဘူး။ ဒီမိုထောက်ခံရင်ပါတီဝင်ဟုတ်မဟုတ် ကုလားပေါ့။ ဒီလိုလည်းထပ်သုံးနှုန်းတယ်။ NLD တိုင်းကုလားမဟုတ်သလို။ ကုလားတိုင်း ဒီမိုတွေဟုတ်မနေဘူး။ ဒီမိုစကားပြောတိုင်း ပါတီဝင်ဟုတ်မနေဘူး။ NLD ပါတီဝင်တွေတိုင်းလည်း ဒီမိုသမားတွေဟုတ်မနေဘူး။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုပြောလည်းဆိုတော့ သိစေချင်လို့ပါ။ အခုချိန်ကျမှ သံဃာထိ မခံဘူးကွဆိုတဲ့ ဘုရားဒကာ ဖွတ်တွေ အရေခြုံထားတော့ ဖွတ်မှီးကလည်း ပေါ်နေတော့မြင်လို့တော့သိပ်မကောင်း ဘူး။ လမ်းမှာသံဃာဆိုတာတွေ့ရင်တောင် အရိပ်ရှောင်နင်း ရမှန်းနားလည်ကြရဲ့လား ဒီလိုအခြေခံပါမေးကြည့်ချင်တယ်။ သံဃာကိုအရမ်းတော့ ရိုသေတာပဲ။ တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ဘုရားရှစ်ခိုးရမှန်း မေတ္တာပို့ရမှန်း သိမသိတော့ မပြောတတ်ဘူး။ သံဃာထိ ဓါးကြည့်ဆိုတဲ့ သူတွေ။ လေးစားသလိုတော့ရှိပေမဲ့။ ရွှေဝါရောင်တုန်းကဖွတ်တွေသတ်လို့ သေခဲ့သမျှ။ ရိုက်နှက်ခံရသမျှ၊ ထောင်ထဲထည့် ရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသမျှ တစ်ခွန်းမှမဟရဲဘူး။ အခုတော့ သံဃာထိရင် အသက်နဲ့လဲကြမဲ့ပုံမျိုးတွေ။
ကောင်းပြီ… ၀ါဒဖြန့်ပြီး NLDကိုပုတ်ခတ်ဆော်ကားတာ ခဏဘေးချိပ်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်စွာပဲ ပြောကြပါစို့။ NLDကပါဆိုပြီး သံဃာတော်တွေကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း စော်ကားနေတယ်ဆိုတဲ့စကား
တစ်လုံးနဲ့ NLDကိုအပုပ်ချ အောက်လုံးနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ သကောင့်သားများမေးကြည့်မယ်…..
လက်ရှိ ဒီမိုတွေက သံဃာတော်တွေကိုစော်ကားနေတယ်လို့ ပြောချင်ရင်……
ဆရာတော်အရှင် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသကို ဒီမိုသမားတွေဆဲနေလား…..?
ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိကကိုကော ဆဲနေသလား…..?
အဓိကအကျဆုံး NLDက ကုလားပါတီတကယ်ဖြစ်နေရင် တရာဝင်စာထုတ်ပြီးဆဲတဲ့ ကြေငြာချက်ထုတ်သလား….?
အဲ့ဒီလိုဒီမိုတွေက သံဃာတော်တွေစော်ကားနေတယ်ဆိုပြီး မဟုတ်မဟတ်တွေ လူထုကြားသံဃာတော်တွေကြားကို ၀င်ပြီးခလောက်ဆံကြတယ်။ မဟုတ်တမ်းတရားတွေ လူထုကြားထဲကို သွေးခွဲသပ်လျှိုဖို့ နည်းတွေသုံးလာတယ်။ ဘာသာအချင်းချင်း ညီညွတ်မှုတွေကိုပါ
ဖြိုခွဲလာသလို တန်ပြန်ဝါဒဖြန့်မှုတွေနဲ့ ဆိုက်ဝါးတွေသုံးလာတာ သူတို့ဘာသာချစ်မချစ်ထက် ကိုယ်တွေဘာသာအပေါ် အထင်မြင်လွဲမှားတဲ့ ပုံရိပ်တချို့စွန်းထင်းခံလာရပါတယ်။ နားလည်ပေးတဲ့ ဘာသာခြားတချို့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာက အခုမျိုးချစ်တွေနဲ့
ထပ်ပြောစရာရှိတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါတီဝင်တွေက ဘုန်းကြီးတွေဆဲသလိုလို မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရေးကြတယ်။ တကယ်က NLDမှမဟုတ် လူတိုင်းဘာသာဝင်တိုင်းမှာ ဦးနှောက်ပြည်ဝစွာ ဝေဖန်နိုင်ကြပါတယ်။ အသိပညာလည်း ကိုယ်တွေထက် မြင့်မားကြပါတယ်။
ဘယ်ဘာသာဝင်ဘယ်လိုဆိုတာ သိနေတဲ့အချက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘာသာဝင်တိုင်း ပလီဆရာပလီဆရာနဲ့မတူရင် သူတို့လည်းဝေဖန်မှာပါပဲ။ သင်းအုပ်ဆရာ သင်းအုပ်ဆရာနဲ့ အရည်ချင်းမမှီရင် သူတို့လည်း ဝေဖန်မှာပါပဲ။ ဘုန်းကြီးက ဘုန်းကြီးဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ စောင့်ရမဲ့ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်ရင်လည်း ဝေဖန်မှာပါပဲ။ လာသာတစ်ခုရဲ့ပုံသေရှိတဲ့ပုံရိပ်ကို ချိုးဖောက်လာရင် ကိုယ့်ဘာသာထဲကမှမဟုတ် အပြင်လူလည်း ဝေဖန်မှာပါပဲ။
အခုတော့ အဝေဖန်မခံနိုင်ဘူး ဘုန်းကြီးထိဓါးကြည့်တွေ…. ရွှေဝါရောင်တုန်းကဘယ်မှာသွားသေနေကြမှန်းတော့ မသိဘူးဗျာ။ ခုကျမှ သင်္ကန်းမြင်တာနဲ့ ထိုင်ကန်တော့ ဒီလိုဆိုလာတယ်။ အဲ့ဒီတော့ … ကိုယ်ကျင့်သုံးတဲ့ မူလေးပါထည့်ရေးပါ့မယ်။
သင်္ကန်းမြင်တိုင်းတော့ မကန်တော့နိုင်ဘူး။ သင်္ကန်းမြင်တိုင်းကန်တော့ရမယ်ဆိုရင် ဘုန်းတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကို ဘယ်ကိုးကွယ်တော့မလည်း သင်္ကန်းဝယ်ပြီး အိမ်ကဘုရားစင်မှာတင်ထားပြီး ထိုင်ကန်တော့နေတော့မှာပေါ့ဗျာ။ ဘာဆွမ်းမှကပ်စရာမလိုဘူး။
သံဃာက သံဃာ့နည်းနဲ့ သံဃာ့သိက္ခာပုဒ်နဲ့ နုတ်ထွက်စကားလုံးတွေက မညီရင် သံဃာလို့လုံးဝမသတ်မှတ်ဘူး။ ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကတည်းကလည်း သံဃာအတုယောင်ရှိတယ်။ ဒီတော့ …. မင်းတို့ဘာသာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမင်ပြီးကိုးကွယ်ကြ… ငါတို့ကတော့ သံဃာစစ်မှန်တွေကိုပဲကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တယ်။ သင်္ကန်းခြုံပေးပြီး သံဃာသိက္ခာ
သမာဓိ ပညာမပါရင် မကန်တော့မကိုးကွယ်နိုင်ဘူး။ ခုခေတ်ကဖွတ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိတော့ ….
သံဃာကိုရိုသေမပြနဲ့ ငါးပါးသီလနဲ့ ဘုရားဟောအတိုင်း
ကျင့်ကြံနေထိုင်တတ်မှ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ဓမ္မကို
ကာကွယ်ဖို့စကားပြောကြ။ အစ္စလာမ်မစ်တွေ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်
အစိုးရကိုသွားပြော…. လူထုကြားထဲမှိုင်းလာမတိုက်နဲ့ …. ။
ကိုယ့်ထက်အသက်အရွယ် ကြီးတဲ့ ဒေါ်စုအပေါ်
အောက်လုံးတွေနဲ့ ဆဲဆိုနေတဲ့ မင်းတို့ဖွတ်မှီးတွေ
သာဖြန်းလာမလုပ်နဲ့ ….မြောင်းရေနဲ့ ပါးစပ်ကိုပလုပ်ကျင်းလိုက်
.သာသနာရော နိုင်ငံရော နလံထူစရာမရှိ..။”
မသီတာ (စမ်းချောင်း) ၏ ဖြေကြားချက်
ဟောပြောပွဲ ကိစ္စက ကျမတို့ဘက်က ဖျက်လိုက်တာ။ ဆရာသင်းရီပဲ သိတယ်။ ကျမတောင် မသိ လိုက်ဘူး။ ဆရာသင်းရီကို အဲဒီမြို့က ဘုန်းကြီးက ပြောတယ်တဲ့။ လူလဲပေးပါ ဆိုပြီးတော့တဲ့။ အဲလို ဆိုရင်တော့ လဲမပေးနိုင်ဘူး။ ဘယ်သူမှလာမဟောတော့ ဘူးဆိုပြီးတော့ ဖျက်လိုက်တာ ။ ပေါင်းတည်နဲ့ ပေါက်ခေါင်း ၂ ရက်ဆက်တိုက်လုပ်ဖို့ လုပ်တဲ့ အစီအစဉ်က ပေါင်းတည်မှာ ပျက်သွားတယ်။ ပေါက်ခေါင်းမှာ ဟောဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘုန်းကြီးနဲ့ ပွဲစီစဉ်တဲ့
ကလေးတွေနဲ့ ပြဿနာ တော်တော်တက်တယ်လို့ ကြားတယ်။ အဲဒီက ကလေးတွေ က ပေါက်ခေါင်းကို လာပြီးတော့ နားထောင်တော့ သူတို့က ဖိတ်ချင်တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ပြန် လုပ်မယ်။ ပြန်ခေါ်ပေးပါလို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာသင်းရီက စိုးရိမ်လို့ မလုပ်တော့တာပါ။
အခုဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် တစုတဖွဲ့က ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရှိအောင် လုပ်နေတာလို့ ပြောရမှာပဲ။ နောက်တပိုင်းက ပညာရည် နိမ့်ကျမှုပေါ့။ တသက်လုံး Isolate (အထီးကျန်) ဖြစ်နေတာကနေ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်နေတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့်နဲ့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကို မျက်ခြေပြတ်နေရတဲ့ လူထုက ပညာရည်နိမ့်ကျမှုကြောင့် တခုခုဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးတယ်။ ပြောင်းလဲ ပြုပြင်လို့ မရတဲ့အရာတွေကို ပိုပြီးတော့ တန်ဖိုးထားနေကြတယ်။ အဲဒီပြဿနာတွေက အရင်းခံတယ်ပေါ့။ အပေါ်ယံကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဘာသာရေးအရ သဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းက နိုင်ငံရေး ပြဿနာပါ။
နိုင်ငံတခုက သူ့ရဲ့ လူထုကို အခြေခံအခွင့်အရေးတွေရယ်၊ ဒီမိုကရေစီ သဘောတရားတွေရယ်ကို လုံလုံလောက်လောက် အသိမပေးနိုင်ခင်မှာ အဲဒီလို အသိပေးဖို့ ကြိုးစားရာမှာ မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Failed State တခုရဲ့ လက္ခဏာတွေပေါ့။ ဒါဟာ ကျဆုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံတခုရဲ့ လက္ခဏာတွေပါပဲ။ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာဆိုတာကို တခုတည်း၊ တထပ်တည်း ဆွဲသွင်းထားလို့ မရဘူးလေ။ ဆိုပါတော့ ဗမာလူမျိုးမှာ ဆိုရင်လည်း ဗမာတိုင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာမှ မဟုတ်တာ။ ကျမတို့ တိုင်းရင်းသားထဲ မှာလည်း ကရင်လူမျိုးဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာကရင် ရှိတယ်။ ခရစ်ယာန် ကရင်ရှိတယ်။ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှု ဆိုတာက လူတယောက်ချင်းစီပဲလေ။ မိသားစုတခု ထဲမှာတောင် အဖေကတမျိုး သမီးကတမျိုး ဖြစ်နိုင်တာပဲ။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုက အင်မတန်မှ ပုဂ္ဂလိကဆန်ပါတယ်။ လူမျိုး ဆိုတဲ့ အရာမှာလည်း ပြောင်းလဲလို့မရဘူးလေ။ မွေးကတည်းက ဗမာဆိုရင် ဗမာပဲလေ။ အဲဒီလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ မရတဲ့ အရာတွေအပေါ်မှာ လိုက်ပြီးတော့ ခွဲခြားကန့်သတ်တယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်နဲ့ လုံးဝ မလျော်ညီတဲ့ကိစ္စပါ။ တသွေး၊ တသံ၊တမိန့်ဆိုတဲ့ အာဏာရှင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြန်သွားချင်နေကြတာလား။ ဒီမိုကရေစီလို့ ပြောရင် မတူခြားနားမှုတွေကို လက်ခံနိုင်ဖို့။ လက်ခံပြီးတော့မှ အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်သင့်တာပေါ့။ အဓိကကတော့ ပညာပေးဖို့ လိုတာပါ။ အကုန်လုံး ဝိုင်းအားထုတ်မှ ရမှာ။
. အပေါ်က ဦးဦးဒေါ်ဒေါ်ကိုကိုမမတွေအကုန်လုံး
. ဘုန်းကြီးတွေ မယ်သီလတွေဝတ်ကြဗျာ
. စည်းစိမ်တွေ ကျုပ်ကိုအပ်ခဲ့
အတွက်မမှားရင်.. မြန်မာပြည်မယ်.. ဘုန်းကြီး .. သီလရှင်.. ကပ္ပိယ..မှီခိုစားသူများ.. ၅သန်းလောက်ရှိမယ်..
ကျမ်းမာသန်စွမ်းပြီး.. အလုပ်လုပ်နိုင်သူ(လုပ်အားထွက်လာနိုင်သူ)… ၂သန်းလောက်အသာလေးပဲ..။
ဒါတောင်.. . တရားစခန်းဝင်သူများနဲ့.. သူတို့လုပ်အားများ..မပါသေးး…။
တတိုင်းပြည်လုံး.. ၀တ်ကြဗျ…။ စခန်းဝင်ကြဗျ…။
စားစရာတွေနဲ့တိုးတက်မှုတွေ.. စည်းစိမ်တွေ.. နတ်တွေကမိုးပေါ်ကနေချပေးလိမ့်မယ်..
သာဓု… လို့…။ ကုသိုလ်ရတယ်..လို့..။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတာနဲ့အမျှ ဘယ်သူ ဘယ်အရေခြုံထားတယ်ဆိုတာ တွေ့ရတော့မယ်။ ဒစစ်တဗိုင်းအစိုးမရu သူ့လူကိုယ်ဖက်သား sleeper cellတွေ အများအပြား ဒီမိုအုပ်စုထဲမှာ၊ ကြားနေအုပ်စု၊ မီဒီယာ၊ လိုကယ်အန်ဂျီအို၊ သာသနာ့ဝန်ထမ်း အသွင်အမျိုးမျိုး မြှုပ်နှံထားတယ်။ အချိန်ကျရင် ထုတ်သုံးဖို့ဆိုတော့ မကြာခင် ဟိုတစ ဒီတစ ထွက်လာ အော်ဟစ် ဆူညံ သောင်းကျန်းကြပါမည်။ တဖက်မှာလဲ အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်တွေက သိသိနဲ့ဖြစ်စေ မသိတသိဖြစ်စေ အရှိန်ဖြည့် ဓာတ်ဆီလောင်းဖို့ တာဆူနေကြပြီ။ စစ်တပ်ဗျူ ဟာကို လေ့လာကြည့်လျင် မြွေမသေ တုတ်မကျိုး အဲဒီ အစွန်းရောက် အုပ်စုများအတွက် နေရာ ဟထားပေးပြီး တဖက်မှာလဲ လူထုသူရဲကောင်း ရှေ့ဆောင်တပ်ဦး မဖြစ်သွားလေအောင် အောက်လမ်းနည်းမျိုးစုံသုံး ထိန်းကွပ်ထားတယ်။ ဘုန်းကြီးဆိုးသွမ်းတွေထွက်လာတာ ကြည့်ခြင်းဖြင့် တဖက်မှာ မြှောက်ပေးပြီး တဖက်မှာ နာမည်ဖျက်ထားတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်က နာမည်ဆိုးဖြင့်သာ ရေတိုကျော်ကြားစေပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့အချိန် ကောက်စားပစ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အစွန်းရောက် အဖွဲ့များကလည်း သိပေမဲ့ အခုအချိန်သည်သာ ဆူပူသောင်းကျန်း တောင်းဆိုဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန် အခွင့်အသာဆုံး အချိန်လို့ တွက်ထားပုံပါပဲ။ ရလဒ်အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုထဲ အမြင်ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး စစ်အာဏာရှင် တသွေးတသံတမိန့်ခေတ်ကို ပြန်လည်တမ်းတ (ဒါမှမဟုတ်) မသိစိတ်က လက်ခံသွားနိုင်တယ်။ ၈၈မျိုးဆက်မှာ ကိုမြအေး၊ အန်အယ်လ်ဒီမှာ ရှေ့နေဦးကိုနီတို့ကို ပစ်မှတ်ထားတယ်။ တဖက်မှာလဲ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို အဟန့်အတား လုပ်နေပြီ။ သာမန်အချိန်သွားလုပ်လျင် စစ်တပ်လူဆိုပြီး ဝိုင်းဆဲမှာသိတော့ ဘာသာရေး အမျိုးသားရေး ခုတုံးလုပ်ပြီး လူတွေရဲ့ မုန်းတီးစိတ် နှိုးဆော်ပေးပြီး အမှန်မမြင်အောင် တွန်းပို့တယ်။ ကျနော်တခါ ပြောဖူးတယ်။ အထိကရုဏ်း နှိမ်နင်းရေး နည်းဗျူဟာမှာ ကျင့်သုံးတာရှိတယ်.. ဆန္ဒပြသူတွေကို တစုတည်းထဲ ပိတ်ဆို့ထားတာထက် အကန့်လိုက် အကန့်လိုက် ပိုင်းခြားပိတ်ဆို့တဲ့အခါ လူအုပ်စုကြီးတခုထဲပေမဲ့ အထီးကျန်သွားသလို ခံစားရပြီး သွေးနည်းသူတွေ ဘေးထွက်ကုန်လို့ နဂိုရှိပြီးသား အုပ်စုကြီး ပြိုကွဲရတယ်။ ကိုယ့်ဖက်မှာ အင်အားအလုံအလောက် ရှိလျင် အဲဒီနည်းဗျူဟာ အလုပ်ဖြစ်မည်ထင်တယ်။ ကွန်ပြူ တာဗိုင်းရပ်စ်ကို မသတ်သေးဘဲ ပိတ်ဆို့ချုပ်နှောင်ထားသလို ဖြစ်ပါမယ်.။ ခုလည်း ဘယ်သူဘယ်ကောင်ဆိုတာ ဒီမိုအုပ်စုအင်အား မိတ်ဖက်အင်အားတွေနဲ့ ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားပါ။ ပြောပလေ့ ဆဲပလေ့စေ.. အဲလိုနေရင်း အပိတ်ခံထားရမှန်းသိတဲ့အခါ ဝေလေလေသမားတွေ ရှဲကုန်မည်။ အမာခံဆဲလ်တွေ တင်ကျန်ရစ်ခဲ့မည်။ ကိုယ်ဖက်က ဘယ်သူဘာကောင်ဆိုတာ မျက်ခြေမပြတ်ဖို့ မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့သာလို့သည်။ စစ်တပ်လည်း အခုနည်းဗျူ ဟာကို တွင်တွက်ကျယ်ကျယ်သုံးပါတယ်။ ကိုယ့်ဖက်မှာရှိတဲ့ အင်အား၊ အရင်းအမြစ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ချိန်ကိုက်ပြီး သုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်။